गाईको शल्यक्रियापछि एक पाथी दूध, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काभ्रेपलाञ्चोक। राम्रो जातको गाईको बाच्छोलाई छोराछोरीजस्तै हुर्काएका पनौती–१ का रेवती सापकोटा औधी खुसी थिए। राम्रै पालनपोषण गरेर हुर्काएको उनको रातो माली बाच्छो ब्याउँदै थियो।
मंगलबार एक्कासि गाई छटपटिन थाल्यो। उनले माली गाईलाई व्यथाले च्यापेको बुझेर तातो खोले खुवाए । पहिलो बेत ठानेर सुरुमा सामान्य नै ठानेका उनले माली गाई तीन घण्टासम्म छटपटिएपछि गाउँनजिकैका पशु प्राविधिक कुमार सापकोटासँग सल्लाह लिए।
२० वर्ष लामो पशु प्राविधिक क्षेत्रमा अनुभवी सापकोटाले माली गाईलाई नजिकैबाट नियाले। एकपटक पाठेघरमा हात हाले। उनले निष्कर्ष निकाले माली गाईको पाठेघर पुरै बटारिएको छ, राम्रो खालको पशु चिकित्सकको उपस्थितिमा गाईको पाठेघरको शल्यक्रिया गर्नुपर्छ ।
तत्कालै योजना बन्यो पशु चिकित्सक उमेश मण्डललाई ल्याउने। भक्तपुरदेखि रेवती सापकोटाको माली गाई बचाउन आएका मण्डलको टिमले ६ घण्टाको अथक प्रयासपछि गाईको पाठेघरबाट मृत बाँच्छो निकाले ।
रयालेमा ब्याउन नसकेको गाईको शल्यक्रिया गरेको घटना पहिलो थियो । ६ घण्टापछि लगभग मर्ने अवस्थामा पुगेको गाईको उपचारपछि पशु प्राविधिक सापकोटाले नयाँ अनुभव हासिल गरेको सुनाए । उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले दक्ष प्राविधिक हरेक स्थानीय निकायमा राखिदिए किसानको पशुधन त्यसै खेर जाने नै थिएन।
शल्यक्रियामा आबद्ध चिकित्सक मण्डलले किसानको पशुधनको सुरक्षा गर्नु आफ्नो प्रमुख दायित्व रहेकाले आफूले सोहीअनुसार काम गरेको बताए । शल्यक्रिया राम्रो भएपछि कृषक सापकोटा पहिलो बेतको गाईले दूध देला कि नदेला भन्ने चिन्तामा थिए ।
गाईले बिगौतीमै एक पाथी दूध दिएपछि सापकोटा अचम्मित भए । ‘भँुडीमा टाँका नै टाँका छन्, अहिले नियमित रूपमा दूध दिइरहेको छ,’ कृषक सापकोटाले भने, ‘छोराछोरीको जस्तै माया गरेर हुर्काएको गाई बाँच्यो यसैमा म खुसी छु ।’
रयालेका पशुपालक मंगलबारबाट नयाँ कुरा सिकेको बताएका छन् । स्थानीय कृषक ऋषि सापकोटाले समयमै पशुको उपचार गराउन सके किसानले ठूलो क्षति बेहोर्नु नपर्ने अनुभव हासिल गरेको बताए । राजधानी दैनिक